Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yePaphos
Bukela ividiyo ekhuluma ngePaphos
Hlola iPaphos idolobha lapho umoya wothando nomlando uhamba khona ngokusebenzisa izifunda zawo ezicebile nangamasiko ngokwemvelo. Inhloko-dolobha yalesi siqhingi iminyaka engamakhulu ayisithupha, iPaphos ifana nomnyuziyamu ovulekile.
Ngomlando osusela emuva eminyakeni eyizinkulungwane eziyisishiyagalombili, uPaphos unengcebo yengcebo yezivakashi. Kusukela kusukela Stone Age, Hellenistic and Roman times, Byzantium kuze kube namuhla.
IPaphos yaziwa njengendawo okwakuzalwa kuyo unkulunkulukazi wamaGrikhi Aphrodite futhi ezikhathini zakudala kwakuyidolobha nenhloko yamasiko esiqhingi. IPaphos yanamuhla ihlukaniswe kabili, nengxenye engenhla yegquma iyisikhungo sezentengiselwano, futhi ephansi Kato Paphos equkethe amaphuzu asemqoka emivubukulo yemisebenzi yezokuvakasha kanye nezinsizakalo zabavakashi.
Umasipala wendawo wenze imizamo emikhulu eminyakeni edlule ukwenza ngcono abaphansi Kato Paphos indawo, ehlanganisa amahhotela, imigoqo kanye nezindawo zokudlela ngasogwini olude olungamakhilomitha ambalwa. Kunomjikelezo omusha osanda kwakhiwa / 'wokukhuthaza' oholela olwandle nasendleleni ende yasogwini enokubukwa okumangalisayo - kufanelekile ukuhamba kwekuseni noma kusihlwa.
Kuhlanganiswe namadolobhana amadala namasha, amadolobhana asemakhaya nezindawo zokungcebeleka ezimnandi, isifunda siyikhaya kwezinye zezindawo ezinhle kakhulu zobuhle bemvelo kulesi siqhingi, kanti izindawo zawo eziningi zemivubukulo zibalulekile emlandweni, ngenkathi uKatos Paphos ememezele indawo eyi-UNESCO Yamagugu Womhlaba. wonke.
Ihlanganiswe ethekwini elingumngcingo kanye neNkazimulo Yesikhathi Esimangazayo, izindawo zikaPaphos zivele ziluleke ukuze zifake indawo yokuvakasha yePolis Chrysochous. Indawo enhle nenokuthula - eyaziwa ngokuthi yi- 'Polis' - inwebile yaba yisifunda esincane ngokwayo, futhi ihlanganisa i-Akamas National Park enhle, iLara beach - okuyindawo yokuzalanisa izimfudu, nendawo yokukhosela yendabuko. kaLatchi.
Ngesikhathi uhambela le ndawo, wedlula eBaths of Aphrodite, etholakala eduzane nePolis. Izinganekwane zamaGrikhi zitshela ukuthi unkulunkulukazi wothando nobuhle uhlushwe lapha, futhi kungenye yezindawo ezihehayo esifundeni ezilandela izindaba zayo. Ukuxhumana kwakhe no Cyprus iqala ekwakhiweni kwamatshe okwaziwa njenge-Petra tou Romiou (iDwala / indawo ka-Aphrodite), lapho avuka khona amaza. Ukusuka lapho, yiya endaweni yakhe engcwele eKouklia.
Ngaphezu kwalokho, isigodlo sezindela i-Agios Neofytos sitholakala esigodini esiseceleni, futhi sasungulwa yiCypriot ascetic Saint Neofytos ezungeze i-1200. Isigodlo sasePanagia Chrysorogiatissa, eduzane nedolobhana lasePanagia, sibalulekile nasezakhiweni zalo ezigcinwe kahle ezakhiwa ngekhulu le-18th.
Okumaphakathi kweHlathi lePaphos indawo enhle yezintaba yeCarl Valley. Le ndawo iwela umgwaqo wezwe oya eStavros tis Psokas, indawo eyengeziwe yezintaba okuhlala kuyo iMouflon (Ovis gmelini ophion) enqabile.
Iningi lemisebenzi yangaphandle nayo ingajatshulelwa, ithuthukiswe ngokwengeziwe ngesikhumbuzo sezenkolo, ama-wineries kanye neminyuziyamu, okwenza isifunda sePafos kube yindawo yemvelo namasiko.
I-Paphos inogu olungaphezu kwe-50 km, esifundeni esivulekele umphakathi, futhi kunamabhishi angaphezulu kwe-12 aluhlaza anikezwe amabhishi, okwenza, iPaphos indawo efanelekile ukubhukuda, ukudonsa noma ukuhlwitha unyaka wonke.
IPaphos ihlanganisa amabhishi amahle, umlando, impilo yasebusuku nezindawo zokuphumula.
Idolobhana lasePomos, elenga emaphethelweni osogwini olusentshonalanga kweCyprus, lisendaweni eyi-20 km kude nePolis Chrysochous, esendleleni eya e-Akamas yemvelo reservation. Kuyidolobhana elibuyelwe emuva elinokuthula nokuthula. Ilungele labo abafuna ukuphila iqiniso Cyprus indlela yempilo….
Yindawo enhle yokuhlanganisa amaholide nokuhamba ngomlando. Gxila ku-Archaeology, umlando kanye nesiko lePaphos kanye nesipiliyoni ekuqaleni kokubhula komhlaba okudala kakhulu emhlabeni.
IPaphos yakhiwa yizindawo ezimbili: a) idolobhana eliphansi noma i-'Kato Paphos ', ethekwini kanye namahhotela amaningi abavakashi kanye nobusuku ebusuku kanye b) nedolobha elingaphezulu (' Ktima Paphos ') okuyiwona olawula ukuphatha, ukuhweba kanye Idolobhana lesitolo samanje lesifunda sasePaphos. Imakethe isedolobheni elingenhla. Zombili lezi zingxenye zincane ngokwanele ukuzulazula ngezinyawo, yize abantu abaningi bethatha ibhasi ukuya phezulu egqumeni ukusuka endaweni ethekwini. Amabhasi ayatholakala ukufinyelela eCoral Bay, Polis nakwezinye izindawo zasemakhaya. Kodwa-ke, kulula ukusebenzisa imoto (ibhayisekili / i-quad / imoto) ukuhamba ngokuya phakathi Izintaba zaseTroodos, peninsula ye-Akamas noma yehla ithrekhi eshaywayo ukuthola amadolobhana amancane emagqumeni. Kuqala ukushisa futhi kunomswakama ehlobo (i-33 deg C ne-90% umswakama) phakathi ngasekupheleni kukaJuni kuya ekuqaleni kukaSepthemba, ngakho-ke isimo somoya singamukelwa emotweni ngaleso sikhathi. Uhambo lonyaka aluncane kangako kepha kwesinye isikhathi kuba neziqalo ezibandayo ngoJanuwari nangoFebhuwari. Iwebhusayithi esemthethweni Paphos Cyprus esifundeni.
IPaphos Archaeological Park inezindawo eziningi ezihehayo, kubandakanya neNdlu yaseDionysos kanye neNdlu yamaThembu, omabili la mabhodlo ezindlu ezinkulu zaseRoma ezazidume ngobuciko bazo.
Amabhomu amaKhosi, yize empeleni kungeyona indawo yokungcwaba abasebukhosini basendulo, ayakufanelekela ukuba negama lelo. Kule ndawo kule ndawo kutholakala amathuna asikiwe yizikhulu eziphakeme nezakhamuzi ezicebile. Yize onke amathuna esephangiwe, okusalayo kusewumfanekiso omuhle kakhulu wokuphila (emva kwempilo?), Emuva ngekhulu lesine. Amathuna amakhulu akule "yinkimbinkimbi" ayamangalisa, aqoshwe edwaleni eliqinile futhi anombono wezakhamizi ongenza noma ngubani phakathi kwabaphilayo abe nomhawu!
IPaphos Fort, esephepheni lemashi, yibhokisi le-squat elinomlando ogqamile njengenqaba nejele ngaphansi kwabaphathi abaningi. Ukufakwa emzimbeni okwakhiwe manje kwakhiwe ngabaseTurkey e1586 futhi kwagcina kusetshenziswa abaseBrithani ngenkuthalo. Vula nsuku zonke kwi-6 PM (ehlobo.)
ITala Village, etholwe phezulu enyakatho nentshonalanga yePaphos, iTala iyidolobhana elihle lendabuko, manje elinabantu abaningi abango-expat kodwa elinabantu abahle base-Agios Neophytos Monastery abaseduze nohlu oluhle lokudlela.
I-Episkopi Environmental Center, i-Episkopi Village (ngebhasi lendawo noma imoto (noma unyawo)). I-Episkopi Village imayelana ne-10 km NE ye-Paphos (hhayi leyo lapho kusetshenziswe khona amabutho aseBrithani.) Yidolobhana elidala nelithakazelisayo elinemigwaqo enomoya ovunguzayo kanye nobuso bayo bedwala. Itholakala esiGodini esihle sase-Ezouza, isemaphethelweni ongezansi womkhondo wemvelo ovela eTsada / Minthis Hills Golf. E-2013 isikole samabanga aphansi saguqulwa senziwa indawo enhle kakhulu yezemvelo enamafilimu, imibukiso kanye nengadi yokukhombisa izitshalo nezilwane zasendaweni.
IPaphos bird Park. Ipaki enkulu yezilwane etholakala enyakatho yePaphos.
I-Odeon, inkundla yemidlalo yasendulo yamaGrikhi epaki yemivubukulo, ngezikhathi ezithile ibamba imidlalo nokudlala umculo.
IPaphos Aphrodite Water Park iyipaki lamanzi elikhulu, elihlaba umxhwele, futhi elihle kakhulu. Inqwaba yama-slide ukugcina yonke iminyaka ihlekiswa, kanye nokugibela kwemifula okuvilaphayo, imishini yamagagasi nakho konke okunye ongakulindela kusuka kumapaki amanzi amahle kakhulu.
Hamba ngendlela yasogwini. Kunendlela enhle kakhulu, egandayiwe, esogwini esuka eTombs yendawo yamaKhosi iya eGeroskipou Beach. Kulabo abazimisele ukuhamba emhlabathini onobunzima obuncane kungenzeka ukuhamba yonke indlela ukusuka eSikhumulweni Sezindiza ucishe ufike eCoral Bay, onamamitha ayikhulu kuphela umgwaqo. Uhambo oluhle lokujabulela umoya ovunguza olwandle futhi, entwasahlobo, izimbali ezikhula ngasolwandle.
I-Tomb of the Kings, (i-25 min ukuhamba esuka ethekwini). Iqoqo lethuna lamatshe amatshe
IKato Paphos, (Eduze Kwechweba kanye nesiteshi esikhulu sebhasi). Indawo esemqoka yemivubukulo. Kuhle ukuvakashelwa ukubuka i-mythological mosaics
I-ATV safari ihamba ngamathrekhi amangalisayo kakhulu kulesi siqhingi eminye yemisebenzi ethandwa kakhulu endaweni. Ukuqashwa kwezithuthuthu kwaTT & izinkambo kanye nabahlinzeki abaningi endaweni banganikela ngalezi zishoshovu
IKings Avenue Mall inikeza isipiliyoni sokuthenga esithe xaxa edolobheni kodwa ungathola futhi ukuthakazelisa ukuvakashela idolobha elidala likaPaphos futhi uhambe ngezitolo eziningi nezindawo zokudlela esigcawini esilungisiwe.
Isikhungo sokuthenga sakwaDebenhams sinendawo ende esungulwe ngaphambi kwendawo yezitolo futhi zinezingubo ezisezingeni eliphezulu nezimonyo.
I-Paphos inikezela ngengcebo yezinketho zokudlela. Kunokukhethwa okungenamkhawulo kusuka eChina kuya eMexico, e-Italian kuya eNdiya. Kepha igugu elisesithombeni sikaPaphos yindabuko yalo yasendulo yaseCyprus ne-sea sea. Yiya ethekwini ukuze usampule izinhlanzi ezisanda kubanjwa kwenye yezindawo zokudlela zasolwandle eziningi ngaphambili. Ngena kwelinye lamadolobhana amaningi afrasha i-Paphos idolobha ngokudla okuyiqiniso komoya nokuma komhlaba. Yibhekise ezintabeni, noma ushayele esigodini saseKathikas lapho kunenqwaba yamathafa endabuko.
Faka noma yisiphi isidlo se-cyprus sendabuko ngewayini elivela e-Nelion Winery, uVasilias Nikoklis inn unikeza amawayini ahlukahlukene endawo aqala eCyprus apperitif zivania, ukugcoba kabusha, newayini elimhlophe elomile naphakathi elimhlophe nelibomvu, i-ofthalmo ne-shiraz.
I-Akamas Peninsula etholakala kude nentshonalanga yeKhupro. IPaphos idolobha elikhulu eliseduzane kule ndawo yobuhle bemvelo obuvelele. Usuku kungenzeka lwanele ukuhlola ama-gorges ajulile endawo yasendle kanye nama-sandy sandy. Lokhu kuyindawo yokuhlukahluka okukhulu nokubaluleka kwemvelo. Ikhaya lezinhlobo zezitshalo ze-530, okungokwesithathu kokuphelele kweCyprus, i-126 zazo ezigcwele esiqhingini saseCyprus. Ihlala ingasashintshiwe kuze kube yimanje ikakhulukazi ibonga ukungafinyeleleki kwayo.
IBlue Lagoon yayisogwini lweNhlonhlo ye-Akamas. Kunokuvakasha okuningi kwesikebhe okunezindawo zokubhukuda ezihambela amanzi acwebile acwebile. Ungahlela uhambo olusuka ehhotela lakho noma ushayele eLatchi Harbour ngokwakho bese unqamula kolunye uhambo oluvame ukushiya e-10: 30 noma 1: 30.
Isigodi somfula iDiizizos yipharadesi elingafakwanga lababhekisi bezinyoni nabathandi bemvelo. Shayela edolobhaneni laseNikoklia ulibangise Izintaba zaseTroodos futhi ujabulele ukubukwa. Imizana emincane yama-Scenic, imindeni igijimisa izindlu zangasese nama-winers.
Isigodi sase-Ezouza, esingafinyelelwa ngebhasi lendawo, sihle kakhulu kubabizi bezinyoni bendawo nabathandi bemvelo. Akunasidingo semoto; indawo enhle yokuhamba.
Ukuya ezintabeni zaseTroodos kushiya ngoMsombuluko nangoLwezine. Suka e8am bese ubuyela ngase5pm. Amanani ayancintisana futhi aqala ukuzungeza i- € 17.